Kismaayo News » Waayeel Ismarin habaabinaya: Qormo Xiiso leh
Waayeel Ismarin habaabinaya: Qormo Xiiso leh
TOLMOOGE iyo ANNA-LENA way is garab fadhiyaan, waxay saaran yihiin diyaaradda KLM ee laga leeyahay dalkaasi Holland, waxayna ku sii jeedaan dalka Imaaraat-ka Carabta ee midoobay oo ay u xusheen dalxiiskooda. Tolmooge waa 75 jir Somaali ah oo 45 sano oo cimrigiisa ka mid ah ku qaatay Yurub. Dhawr dal ayuu ka soo degay Yurub gudaheeda sida Talyaaniga, Belguim, Sweden, UK iyo Holland oo uu haatan kula nool yahay Anna-Lena oo ah 60 jir waayuhu saaciday una xarragooneysa sida gabar yer.
“Waryaa, ma Soomaali baad tahay?” ayuu qof aanan u jeedin iga weydiiyey meel kuraasta dhexe ee diyaaradda ah, xilli aan boorsadeydii gashanayey sanaadiiqda boorsooyinka lagu xaseysto ee diyaaradda dhexdeeda ah. Markii aan boorsadii xaseeyey, kuna xiray kabiinkii ayaan soo jalleecay dhankii la iiga dhawaaqay, weji waayeelnimo ay ka muuqato ayaa ii bidhaamay. Qofka ii muuqdaahi tintiisa oo dhami waa cirro, kol ay baalasha indhaha tahayna tin madoobi qofi kama soo helayo oogadiisa.Markii aan u soo dhowaaday ayaan odeygii ii muuqday ee ii dhawaaqay ku iri “Assalaamu caleykum adeer?” Tolmoogagse igama raddin salaanta oo wuxuu iigu jawaabay hadal caadi ah. Aniga waxaan u qaatay in uusan i maqal.
Waxaan Tolmooge waydiiyey halka uu ku socdo, inta uusan ii jawaabin ayey gabar ka tirsan kuwa diyaaradda ka dhex adeega igu amartay in aan fadhiisto maadaama ay diyaaraddu dhaqaaqeysay oo la isu diyaarinayey in ay duusho.“Waan kugu soo laabanayaa marka ay diyaaraddu kacdo” Ayaan Tolmooge ku iri, sidii ayaan ku fadhiistay kursigeygii.
Fariimo la xiriira u diyaar garowga duulimaadka ayaa bilowday kuwaas oo qaarkoodna video ahaan loo shidayey qaarna ay cod bahiyaha diyaaradda ka sheegayeen nin iyo naag ka tirsan hawlwadeenada diyaaradda, mararka qaarna pilot-ka ayaa dadka la hadlayey oo u sheegayey meesha loo socdo, saacadaha la soconayo iyo inta hawada sare loo galayo, heer kulka inta uu la eg yahay iwm. Iyadoo jawigaas lagu jiro ayey diyaaraddii ka kacday garoonkii diyaaradaha Schiphol ee magaalada Amsterdam, muddo daqiiqado ah ayeyna qaadatay in ay diyaaradda qabsato jawi deggan, astaanta suunkana la damiyo si ay dadka u nafisaan. Horey kama aanan istaagin markii la fasaxay in suumanka la iska furi karo, waxaan sugay inta koox adeegga cunta siinta qaabilsaneyd ay ka keentay qadadii afka lagu dhufan lahaa, xilliguna xilli qado ayuu ahaa, waqtiguna waa xagaa ama Summer sida qofba uu u fahmi karo.
Xagaagu waa xilliga kuleylaha Yurub oo ah xilli ay dadka hawlaha ka yihiin fasax, shaqooyinkana inta badan ay xiran yihiin, waana xilliga ay dadka waqooyiga Yurub ku nooli u dalxiis tagaan dunida inteeda kale, gaar ahaan dalalka qoraxda leh. Sanadku waa 2010. In kastoo Tolmooge iyo Anna-Lena ay ku wajahnaayeen Dubai aniga safarkeygu wuxuu ku wajahnaa Nairobi.
Markii ay dhamaadeen hawlihii service-ka cuntada ee la isugu soo haray in cabitaanada kulul loo dhiijiyo dadka caba, qofkii aan rabinna Kafee loo shubayo ama iska yara gam’ayo maadaama safarki dheeraa ayaan ka soo kacay kursigeyga aniga oo doonaya in aan la soo yara sheekeysto odeygan Soomaaliga ah ee kuraasta iga dambeeya fadhiya. Waxaan dul imid Tolmooge oo ay u shuban tahay nooc ka mid ah qamrada oo la yiraahdo ‘Red Wine’. Waa Qamrada guduudan.
Waan naxay, isagii ayaan eegay, haddana waan is yara qabtay oo waxaan is iri bal yuusan ku dareemin sida aad uga didday odaygan baas ee da’da 75 jirka ku cabaya qamro iyo biir kaaga sii darane waxaa kilkishiisa midig ku dangiigta naag bug ku aqrineysa aaladda ‘Kindle-ka’ . Soo fadhiiso saaxiib ayuu cod xabeeb leh igu yiri Tolmooge. Waan is yara gaabiyey, kaddib wuxuu i baray Islaantii oo uu magaceeda iigu sheegay Anna-Lena. iyadana waxaa miiska u saaran hortaallo dhalo ay ka shubatay nooc biirta ka mid ah oo la yiraahdo Carlsberg.
Anna-Lena waxay i weydiisay in aan Soomaali ahay iyo in kale, “Haa Soomaali baan ahay” ayaan ku irir. Waxaa kale oo ay i weydiisay halka aan ka imid iyo meesha aan ku socdo. Waxaan u sheegay in aan ka imid dalka Sweden oo aan deganahay, kuna socdo Soomaaliya. Waxay igu tiri “Soomaalidu waa aan jeclahay, waayo waxaan ka helay saaxiib qaali ah oo nolosha ila wadaagay, ina farxad geliya” Waxay garabka “Jug ku siisay Tolmooge, isagiina sidii qof aan miyir qabin oo kale intuu u qoslay ayuu yiri “Waa runteed, Anna-Lena way jeceshahay Soomaalida”.
Anna-Lena iyo Tolmooge waxay i weydiiyeen in aan cabo qamrada iyo in kale. Waxaan u sheegay in aanan cabin. Iyadii waxay igu tiri “Mahadsanid” oo kaliya, kaddibna waxay sii wadatay aqriskeedii. Tolmooge wuxuu isku dayey in uu igu qanciyo in aan qamrada la cabo. Wuxuu isku dayey in uu koob iiga dalbo gabadha diyaaradda ka dhex adeegeysay, balse aniga ayaa ku diiday. Odey Tolmooge iyo aniga dood ayaa na dhex martay. Wuxuu igu yiri “Wiil yar oo maskax furan, ilbaxna u eg ayaad tahaye, is furfur, iska cab oo naftaada raalli geli” waxaan ku iri “Adeer nafteyda sidan ayey raalli ku tahay”
Waxaan Tolmooge waydiiyey su’aal ku cuslaatay inuu iiga jawaabo. Su’aashu waxay aheyd “Adeer caruur ma leedahay?” waxaan doonayey in aan ogaado bal odeygan saaqiday inuu reer iyo ubad ka helay Islaantan dabo taagan ee waayeelka reer Holland ah iyo in kale. Cabbaar ayuu iga aamusnaa, kaddib ayuu si hal haleel ah iigu jawaabay “Maxaan dhalnaa waaba wada saaqideene!” ma deminkan baa caruur la dhalaa” ayuu is weydiiyey. Waxaan Tolmooge waydiiyey ma Anna-Lena ayaa kuu dhashay kuwa kaa saaqiday.
“Maya” ayuu yiri isaga oo farta ruxaya. “Mid baas oo Soomaali ah dhashay, deetana way wada saaqideen” Ayuu ku raaciyey. Deetana intuu koobkii soo qabtay, qamraddii si daran u kabooday, daacona ka wareegay ayuu yiri “Mid daroogo ayuu gadaa xabsiga kama baxo oo gurigiisa, mid Qamrada ayuu istaagga ka cabaa oo saaqid, midina Mareykanka ayey nin Jamaican ah oo fanaan ah iskagala nooshahay oo dhammaantood meel iskuma sheegno, hooyadoodna nin kale oo Soomaali ah ayey iska guursatay oo ilmihii way dayacday” ayuu hadalkii ku soo gabagabeeyey. Waxaan is iri Tolmooge Qamrada isaga u shuban uma jeedee wuxuu arkaa tan wiilkiisii uu shubtay. Waa maroodi Takarta ku taallo ma arkee tan kan kale ku taallo ayuu arkaaye ceebihiisa oo dhami uma muuqdaan.
Odeygan masiibada ku dhacday ee ilmihiisa xabsiyada yaalaan, gabadhiisa Jameykaanku heysto, isagana da’daas islaan waayeel ah “Boy Friend” kula ah Holland wuxuu iiga sheekeeyey sida uu ku yimid Yurub iyo goorta uu yimid. Tolmooge wuxuu ka mid ahaa arday Soomaaliyeed oo 1975-dii wax barasho sare loogu soo diray dalka Talyaaniga kaddib markii ay xilligaas dhameeyeen Jaamacadda. Xilligii uu waxbarashada ku jiray ee uu dhalinyarada ahaa ayuu isaga saaqiday oo nolosha dhanka tamashlaha doortay oo naftiisii ayuu xakameyn waayey xilligii uu dhalinyarada ahaa. Markii uu ii sheegay 1975-tii in uu Yurub soo galay isagoo arday ah ayaan u sheegay anigana u sheegay xilliga aan dhashay oo ah 2 sano kaddib marka uu Yurub yimid, wuxuu igu yiri “Caruur baad tahay”. Tolmooge inta uusan duqoobinba wuxuu ahaa nin club-yada aad uga tunta oo aan dumarka ku xulan xalaal iyo xaaraan, wuxuu hadba la tamashleyn jiray tan ugu qurxoon ee habeenkaas ay biyaha kulul iskula cabaan club-ka.
Wuxuu bartay maadaama sharciga, wuxuuna ka gaaray heer PhD, wuxuu qareenimo kaga soo shaqeeyey dalalka Talyaaniga, Belguim-ka, Switzerland iyo Sweden, hase yeeshee waxaa Shatiga lagala laabtay horaantii sagaashamaadkii markii uu feeray xaaskiisa oo ay markaas ku kulmeen iridda club uu isaga u yimid inuu u tamashle tago iyadana u timid hinaaso dartiis iyo in ay odeygeeda ku tiraahdo gali meysid club. Markii uu Club-kaas irriddiisa Tolmooge xaaskiisa ku feerayey ayaa waxaa ay dhibaato yar ku gaartay Gabadhiisa Jenny ee Jamaican-ka la nool oo markaas aheyd ilmo yar oo dusha lagu siday. Booliiska ayaa Tolmooge qabtay markii isaga oo xaaskiisa feeraya ay u yimaadeen, waxayna ku soo oogeen dembi ah ‘Qeyrul Mas’uul’ sidaas ayaa loogala wareegay caruurtii, xaaskii iyo Shatigiiba.
Markii uu xukunkaasi ku dhacay Tolmooge isma qaban, mana helin dad la taliya oo waxaa loo arki jiray nin gaalo iska yeel ah oo kibir badane wuxuu galay nolol jahwareer ah, wuxuu noqday nin iska nool oo hadba gabadhii uu Club-ka kula soo heshiiyo ayuu habeenkaas waqtiga la riixi jiray. Mararka qaarna inta biirta iyo qamrada uu iska badiyey ay sarqaamiyaan ayuu haweenka la tumanahay garaacayey, sidaas ayaana dhawr mar uu xabsi ku galay. Waxaa ugu darnaa horaantii 2000 kaddib markii Gabar kuwa jirkooda iibsado ah ay ku eedeysay inuu u galmooday cinjir la’aan si qasab ah, isla markaasna ay ka walwaleyso inuu qaadsiiyey cudur galmada lagu kala qaaddo. In kastoo gabadhii iyo isagaba la baaray oo laga waayey cudurka ay ka walwaleysay ee HIV/AIDS oo ah mid laga qaado galmoodka, haddana waxaa lagu xukumay seddax sano oo xarig ah, taas oo lagu sababeeyey in gabadha uu la tuntay ay aheyd mid aan weli qaan gaarin.
Dhibaatada ugu daran ee arrintaas ka soo gaartay ayaa waxay aheyd isagoo markaas dhaw ka soo baxay xabsi kale, shaqo uu ka codsaday Shirkad basaska oo darawalnimo ahna loo ogolaaday ayey masiibadan kale ku dhacday. Dalalka Yurub gaar ahaan Sweden oo uu markaas deganaa in qof ilmo yar ama qof ka yar 18 jir u galmoodo waa dembi culus, Gabadhan uu wax la wadaagayna waxay aheyd Baraasiiliyaan 16 jir ah. Aniga oo la yaaban waxa uu ka sheekenayo Tolmooge, misena aad u dhako faaray ayaan waydiiyey sideed isku barateen Islaantaadan cusub ee Anna-Lena, wuxuu iigu jawaabay Anna markeedii hore waxaan isku barangay Xabsiga aan ku xirnaa, waa gabar aad u wanaagsan ayuu igu yiri.
Maxaa iyadana loo soo xiray ayaan waydiiyey, wuxuu igu yiri “Anna-Lena waa Hollandese, iyadoo daroogo qaali ah u gudbineyso Sweden ayaa la qabtay, sidii ayaa isku xabsi na loogu xiray”. Sida uu Tolmooge ii sheegay Anna-Lena waxay Holland ku leedahay dukaan daroogadana lagu gado gabdhaha jirkooda iibsadana sidoo kale laga helo, halkaas oo ay ka sameyso lacag aad u tiro badan. Dalka Holland daroogada dunida inteeda kale ka mamnuuca ah oo dhami waa lagu iibiyaa si sharcigoodu ogol yahay, dukaamada gabdhaha jirkoodu ku iibsadaanina waa kuwo meel walba ku yaala oo ciddii aan anshax iyo ALLAAH ka cabsi celineyn ay ka heli karto goobaha ganacsiga iyo meelaha ku dhaw dhaw. Yurubta kale ka ganacsiga jirka gabdhaha waa sharci darro, waana dembi culus in qof dumar ah ay jirkeeda ganacsi ka sameyso ama galmood lacag lagu siiyo.
Tolmooge oo aan la yaabay waxa uu ka sheekeynayo iyo da’da uu ku jiro ee cirrada uun korkiisa ku hartay ayaan waydiiyey adiga ma hawl-gab ‘Pension’ ayaad tahay mise waad shaqeysaa. Wuxuu iigu jawaabay “Sharci ahaan hawl-gab ayaan ahay, balse waxaan caawiyaa gabadhan aan wada nool nahay ee Anna-Lena. Waxaan waydiiyey maxaad u qabataa? Wuxuu iigu jawaabay meel faras-magaalaha ah oo dad badan soo maraan ayaan fadhiistaa, waxaan halkaas dadka jidka maraya ugu qeybiyaan warqado xayeysiin ah oo lagu xayeysiinayo dukaanka.
Inta uu hadalka ii waday Anna-Lena waxay Tolmooge ula fara kacayaareysay sida in aanan qofba aktooda fadhin. La yaabkeygee! Mar afka ayey mac ka siisaa! Dhabtiisa ayey ku seexataa! Qoorta ayey ka salsalaaxaysaa, afka Dutch-ka ayey ku tiraahdaa ‘Gacaliye’ iyadoo u dhawaaqeysay ‘Mi dakhlin’ ama si u eg. Mararka qaar gacantiisa ayey inta soo qabato xabadka gashataa, isaguna afka uun buu aniga iiga sheekeynayaa mooyee indhaha iyo qalbigaba aad ayuu iyada ugala ciyaarayaa, wuuna ku faraxsan yahay sida ay wax u dhacayaan.
Dhaqanka noocaasi ah ma ahan mid aan kula yaabayo qof Yurubiyaan ah, balse in kastoo dhalinyarada Soomaalida ah ee raga ah eek u kortay Yurub way dhacdaa in ay marar dhif ah ku kacaan sidan oo kale, laakiin bulshadu guud ahaan waxay u aragtaa dembi diin ka bax ah iyo ceeb dhaqan-xumo ah. 75-jirkan xayeysiinaya dukaanka daroogada lagu iibiyo wuxuu ku faraxsan yahay inuu shaqeynayo oo kaliya, waxba kama galin xummaanta waxa uu qabanayo. Wuxuu isu arkaa inuu yahay qof xadaari ah, il bax ah oo waqtigiisa dunida ku qaatay tamashle, farxad iyo raaxo. In kastoo uu xilliyo badan xabsi galay, caruurtiisii isaga seegeen, haatanna islaan waayeel ah oo Hollandese ah dulsaar ku yahay weli waa nin aad isula qab weyn oo aaney u muuqan waxan aan ka sheekeynayo ee xummaan iyo godob ah.
Anaga oo weli sheekadii yaabka laheyd ku jirna ayaan dareemay in uu Casarkii galay, waxaan Tolmooge u sheegay in aan soo dukanayo kuna soo laabanayo, isagiina waxaan ugu baaqay in uu soo dukado walow uu ka cudur daartay. Sidii ayaan sameeyey oo kursigeygii inta aan ku laabtay ayaan dukaday. Markii aan salaadii soo dhameystay, kaligey inta dhakafaar galay oo yaab iyo amakaag is heyn waayey ayaan ayaan Ilaah ka tuugay inuusan dhabbahaasi i marsiin aniga iyo inta Muslimiin ahba.Dib ayaan ugu soo laabtay halkii ay joogeen Tolmooge iyo Anna-Lena, markan waxaa ii go’aansan in aan Tolmooge waaniyo oo ku iraahdo “Weli towbadu way kuu furan tahaye towbo keen la imaw”.
Markii aan ku soo laabtay Tolmooge wuxuu u istaagay in uu suulliga galo. Inkastoo uu da’ ahaa haddana ma aheyn nin jilicsan oo tabaryari uga muuqato sida loo maleeyo marka uu fadhiyo. Waxaa uu u muuqdaa nin aad uga ad adag sida loo arkayo marka isagoo fadhiyo la eego, jirkiisana wu dhisan yahay.
Isagoo weli suulliga safkeeda taagan ayaa dadkii oo dhami loo sheegay in diyaaraddu dhaadhacid bilaabeyso oo hawada Dubai la soo galay, sidii ayaanna anigii la iigu baaqay in aan kursigeyga ku laabto. Waan laabtay anigoo weli aan wax teleefoon ah ka qoran Tolmooge si aan ula soo xiriiro oo u waaniyo.Markii aan diyaaraddii ka degnay iyaga waxay aadeen qeybtii dadka gudaha u socda, anigana waxaan aaday qeybta dadka sii dhoofaya ay ka sii qaataan duulimaadka.
Tolmooge min dhalinyaronimadiisii illaa waqtigan oo waayeelka yahay ee timidii caddaadeen isaga uun baa is marin habaabinaya oo waa waayeel is marin habaabiyey kaligiis, halkan Anna-Lena oo iyada asalkeedaba ka soo jeeddo diin la’aanna ay ku lammaanan tahay si aan sharci aheyn.
Wixii talo iyo dhaliil ah ku soo hagaaji Abukar.albadri@gmail.com